इटालीमा मृत्यु हुनेको संख्या चीनमा भन्दा धेरै पुग्यो ! – Sagarmatha Online News Portal
इटालीमा मृत्यु हुनेको संख्या चीनमा भन्दा धेरै पुग्यो !
काठमाडौं । विश्वव्यापी महामारीको रुप लिएको कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) संक्रमणको हालको इपिसेन्टर इटालीमा ज्यान गुमाउनेका संख्या विश्वमै सबैभन्दा धेरै भएको छ । इटालीमा कोरोना भाइरसका कारण अहिलेसम्म ३ हजार ४ सय ५ जनाको ज्यान गएको छ ।
बिहीबार एकै दिन थप ४ सय २७ जनाको मृत्यु भएसँगै कोरोना भाइरसका कारण इटालीमा मृत्यु हुनेको संख्या चीनमा भन्दा बढी भएको हो ।
गएको डिसेम्बरमा चीनको हुबेई प्रान्तको हुवानबाट सुरु भएको कोरोना भाइरसको संक्रमणका कारण चीनमा ३ हजार २ सय ४५ जनाको मृत्यु भएको छ ।
तर यो तथ्यांकमा सबैले विश्वास भने गरेका छैनन्, धेरैले चीनमा कोरोनाका कारण ज्यान गुमाउनेको संख्या सार्वजनिक गरिए भन्दा अधिक हुन सक्ने आशंका गरेका छन् । र पनि आधिकारिक तथ्यांक अनुसार अब इटाली चीन भन्दा अघि लागेको छ कोरोनाका कारण भएको मृत्युमा ।
इटालीमा कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलिन नदिनका लागि धेरै प्रयास गरिएका छन् । मार्च १२ देखि इटालीका सबै क्षेत्र लकडाउन छन् ।
लकडाउनको अवधि मार्च २५ बाट बढाएर मार्चको अन्तिमसम्म र्पुयाइएको छ । यस्तै सबै इटालियनलाई घरमै बस्न भनिएको छ । तर पनि नयाँ संक्रमण तथा मृत्युको दर भने लगातार बढी रहेको छ ।
विश्वभर अहिले २ लाख २० हजार मानिसमा कोरोनाको संक्रमण भएको छ । यस्तै झण्डै ९ हजार मानिसको ज्यान गएको छ ।
चीनमा बुधबार नयाँ संक्रमण देखिएको थिएन । तर पनि कुल संक्रमितको संख्यामा भने चीन इटाली भन्दा अघि छ । चीनमा कुल संक्रमितको संख्या ८१ हजार भन्दा बढी रहेको छ । यस्तै इटालीमा ४१ हजार ३५ जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ ।
Published On: Friday, March 20, 2020